Counter Strike 1.6: ဤ FPS ကို GNU / Linux တွင်ကစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။ | Linux မှ
Counter Strike 1.6: ဤ FPS ကို GNU / Linux တွင်ကစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။
ဒီနေ့မှာ Entry တစ်ခုထပ်မံထည့်သွင်းပါမည် အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေး အပေါ် GNU / Linux များအထူးသအကြောင်း ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုလိုသည်မှာ အားကစားပြိုင်ပွဲ။ ဘယ်လောက်ပဲအသက်ငယ်နေပါစေကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်သေးငယ်သောအရာများ ဖြစ်၍ ယနေ့တိုင်အောင်မှတ်မိနေပါသည် ဗီဒီယိုဂိမ်းကစား ဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းအသစ်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ်ဂန္တ ၀ င်အဟောင်းတွေ၊ "Counter Strike 1.6".
ဟုတ်တယ် "Counter Strike 1.6" အပေါ် GNU / Linux များ။ ကတည်းကကျော်ကြားသောစကားပုံ FPS ဂိမ်း ၎င်းသည်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အသက်ရှင်ခဲ့သော်လည်းကလေးများ၊ လူငယ်များနှင့်လူကြီးများအတွက်စိတ်အားတက်ကြွမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သေချာပါတယ်၊ "Counter Strike 1.6" ၎င်းသည်အခမဲ့မဟုတ်သလိုပွင့်လင်းမှုလည်းမရှိပါ၊ သို့သော်ယနေ့မိတ်ဆွေများ၊ အထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်များကကစားသူများနှင့်ကစားသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်မျှဝေခံစားခြင်းခဏအတွက်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောဂိမ်းကိုအသုံးမပြုဘဲများစွာလျစ်လျူရှုထားနိုင်သည်။ ငါတို့ပြီးခဲ့သည့်အခြားဆက်စပ်စာပမြေားတှငျပွောခဲ့ကြသကဲ့သို့ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့။
အချို့သောစိတ်ဝင်စားမှုရှိသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့နောက်ထပ်ရှာဖွေရေးအတွက်အောက်တွင်ချန်ထားလိမ့်မည် GNU / Linux အတွက်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော FPS ဂိမ်းများ:
"လူအများအံ့အားသင့်ဖို့အံ့သြဖို့ကောင်းတာကဒီစာရင်းဟာရှည်လျားပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချို့သူများက FPS Games မှာ Linux အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုသိပ်မရှိဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မယ်။" FPS - Linux အတွက်အကောင်းဆုံးလူသုံးသေနတ်သမားများ
Urban Terror: Linux အတွက်အကောင်းဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ပါ
Rexuiz, Trepidaton နှင့် Smokin 'Guns: GNU / Linux အတွက်နောက်ထပ် FPS ဂိမ်းများ
1 Counter Strike 1.6: Cult FPS ဂိမ်း
1.1 Counter Strike 1.6 ဆိုတာဘာလဲ။
1.2 GNU / Linux ပေါ်မှာ Counter Strike 1.6 ကိုအလွယ်တကူ install လုပ်ပြီးဘယ်လိုကစားရမလဲ။
1.2.1 AppImage မှတစ်ဆင့် Counter Strike 1.6 ကို install လုပ်ခြင်း
Counter Strike 1.6: Cult FPS ဂိမ်း
Counter Strike 1.6 ဆိုတာဘာလဲ။
ငါတို့အများစုသိနှင့်ပြီးသား "Counter Strike 1.6" ကမ္ဘာကျော်သည် နောက်ဆုံးဗားရှင်း ဂိမ်း၏ပထမ ဦး ဆုံး Saga ၏ တန်ပြန်သပိတ် မှဖန်တီးသည် Valve ကုမ္ပဏီ။ ထို့အပြင်၎င်းကိုလွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ ကျော်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုနေ့မှစ, အဘို့အဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ် အစွန်းရောက်ဂိမ်း ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်အတိုးတက်ဆုံး multiplayer အွန်လိုင်းပထမလူတစ် ဦး သေနတ်သမား (FPS) ဂိမ်းများထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကတည်းကဒီ post အကြောင်းပါ GNU / Linux ပေါ်မှာအလွယ်တကူမြန်ဆန်အောင်ဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲကျွန်ုပ်တို့သည်ဂိမ်း၏အခြေခံအကျဆုံးအချက်အလက်များကိုလေ့လာခြင်းမပြုပါ။ သို့သော်၎င်းနှင့်ပတ်သက်သောအသုံးဝင်သောနှင့်အသစ်သောသတင်းအချက်အလက်များစွာကိုရယူနိုင်ပါသည်။ ကောင်တာ Strike ဂိမ်းစီးရီးထဲမှာ ရေနွေးငွေ့ပလက်ဖောင်း:
"ကမ္ဘာပေါ်တွင်နံပါတ် -၁ အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုဂိမ်းကိုခံစားပါ။ ဒီလူသိများတဲ့အဖွဲ့ကစားပွဲနဲ့အတူအကြမ်းဖက်မှုကိုအစစ်မှန်ဆုံးစစ်ပွဲရဲ့အပူချိန်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်မြှုပ်ပါ။ ရန်သူအခြေစိုက်စခန်းများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ ဓားစာခံများကိုကယ်တင်ခြင်းနှင့်သင်၏ဇာတ်ကောင်သည်အဖွဲ့၏အောင်မြင်မှုကိုအထောက်အကူပြုကြောင်းသတိရပါ။" ကောင်တာ - သပိတ်ပေါ်
GNU / Linux ပေါ်မှာ Counter Strike 1.6 ကိုအလွယ်တကူ install လုပ်ပြီးဘယ်လိုကစားရမလဲ။
အကယ်စင်စစ်များစွာသော Linuxeros, လက်ရှိကစားသည် "Counter Strike 1.6" အပေါ် GNU / Linux များ ဖြတ်. ရနှေးငှေ့သို့မဟုတ် ဝိုင်, သို့မဟုတ်ကနေတဆင့်အပြေး အင်တာနက်ရေကြောင်းပြအင်တာနက်နှင့်ဆင်တူသည် CS-ONLINE.CLUBသို့သော်၊ အောက်ပါကဲ့သို့သောအခြားရွေးချယ်စရာများရှိနိုင်သည်။
AppImage မှတစ်ဆင့် Counter Strike 1.6 ကို install လုပ်ခြင်း
အတွင်း installer ကိုအသုံးပြုရန် ".AppImage" formatအောက်ပါမှကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးသွားပြီးကူးယူရမည် link ကိုခေါ်ဆိုသည့် Telegram Channel တစ်ခုတွင်၎င်းကိုတိုက်ရိုက် ဦး တည်သည် "AppimageHub".
အောင်မြင်စွာ download လုပ်ပြီးကွပ်မျက်ပြီးနောက် ဖိုင် ".AppImage", ကအပေါ်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ် Applications ကိုမီနူး de la GNU / Linux Distro အသုံးပြု,2ဖြတ်လမ်း, တ "Counter Strike 1.6" နှင့်အခြားအဘို့ "ဘဝတစ်ဝက်".
ယခုမှ စ၍ ပျော်စရာကောင်းသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဂိမ်းများကိုကစားရန်ကစားနိုင်သောဆာဗာနှင့်သူငယ်ချင်းများကိုရှာရန်သာကျန်တော့သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွင်ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည် "မြို့ပြအကြမ်းဖက်မှု ၄"။ ဒါပေမယ့်တစ်ခါတလေကျွန်တော်ကကစားလေ့ရှိတယ် "Counter Strike 1.6" မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူ ကြေးနန်းအုပ်စု ကိုခေါ် GNU / Linux ကိုဖွင့်နေသည်။ ဂိမ်း၏နေ့စွဲညှိနှိုင်းပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဂိမ်းကိုစတင်ပြီးသော့ကိုနှိပ်သည်။ « | » သောအများအားဖြင့်သော့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါတယ် "Esc".
၎င်းသည်အုပ်စု၏ဂိမ်းဆာဗာနှင့် console ဆက်သွယ်မှုကိုဖွင့်ပေးပြီး၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်အတွက်အောက်ပါဝါကျကိုရေးသည်။ connect patojad.mooo.com:27016
တစ်ချိန်ကအတွင်းထဲ၌သူတို့တက်ရောက်ခဲ့ဖူးသောအပေါင်းအသင်းများနှင့်သာပျော်စရာဖြစ်နေသည်။ ဒါကြောင့်သင်ရုံရန်ရှိသည် အုပ်စုတစ်ခုကိုဖန်တီးပါသို့မဟုတ်ပူးပေါင်းပါ၊ ကစားပါ သင့်ရွေးချယ်မှု၏မည်သည့်ဆာဗာတွင်မဆို။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် မည်သို့တပ်ဆင်ရန်နှင့်ကစားရန် el FPS ဂိမ်း ကိုခေါ် «Counter Strike 1.6»; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Counter Strike 1.6: ဤ FPS ကို GNU / Linux တွင်ကစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း။
နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်, David ။ တစ် ဦး ကပျော်မွေ့။
Nvidia သည်ကိုယ်ပိုင်ကားမောင်းသည့်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်လိုပြီး DeepMap ကိုဝယ်ယူခဲ့သည်